'I-Anschluss' yayiyimanyano yeJamani kunye neAstriya ukuba idale 'iJamani ephezulu.' Oku kwachazwa ngokucacileyo yiSivumelwano saseVersailles (ukuhlaliswa ekupheleni kweMfazwe Yehlabathi Yehlabathi phakathi kweJamani kunye nabachasi bayo), kodwa uHitler waxoshelwa njalo ngo-Matshi 13, 1938. I-Anschluss yayingumdala omdala, ozelwe ngemibandela Ubunikazi belizwe kunokuba iinjongo zamaNazi ngoku zidibana nazo.
Umbuzo wesizwe saseJamani: Ngubani owayengesiJamani?
Impendulo ye-Anschluss ngaphambili ngaphambili kwemfazwe, kunye noHitler ngaphambili, kwaye wenza ingqiqo enkulu kumxholo wembali yaseYurophu. Kwiminyaka emininzi, isikhulu saseJamani saseJurophu sasilawulwa nguMbuso waseAustria, ngenxa yokuba oko kwaba yiJamani kwakungaphezu kwamawaka amathathu amancinci enza uMbuso oyiNgcwele waseRoma, kwaye ngenxa yokuba ababusi baseHabsburg balobukhosi bahlala e-Austria. Nangona kunjalo, iNapoleon yatshintshile konke oku, kwaye impumelelo yakhe yabangela ukuba uMbuso oyiNgcwele wamaRoma ugqitywe, kwaye washiya inombolo encinci yamazwe emva. Kungakhathaliseki ukuba uyayibhadela ukulwa neNapoleon ukubetha i-identity entsha yaseJamani, okanye ucinge ngolu hlobo lwe-anachronism, ukuqala okwafuna ukuba onke amaJamani aseYurophu ahlangane kwiJamani enye. Njengoko le nto yaqhutyelwa phambili, yabuya, iphinda iphindele kwakhona, umbuzo uhleli: ukuba kwakukho iJamani, ngaba iindawo zaseJamani ezizithethayo zaseAritri ziya kufakwa?
I-Austrian, kunye ne-Austro-Hungarian kamva, i-Ubukumkani yayinabantu abaninzi kunye neelwimi ngaphakathi kwayo, kuphela inxalenye yeJamani. Uloyiko lokuba ubuzwe nobuzwe buza kubhidliza lo mbuso we-polyglot ngaphandle, kwaye kwabaninzi baseJamani ababandakanya ama-Austrian kunye nokushiya abanye kwilizwe labo beyinto ecacileyo.
Kwabaninzi e-Austria, kwakungekho. Babenabo ubukhosi emva kwabo bonke. UBismarck wayenako ukuqhuba ngokudalwa kwelizwe laseJamani (kunye neyona ncedo elincinci evela eMoltke), kwaye iJamani yikhokelela ekulawuleni iYurophu ephakathi, kodwa i-Austria yahlala ihlukileyo kwaye ingaphandle.
Emva koko iMfazwe Yehlabathi 1 yaza yaza yahlula imeko. Ubukhosi baseJamani buyathatyathwa yintando yesininzi yaseJamani, kwaye ubukhosi baseAustria babhujiswe kumazwe amancinci kuquka i-Austria eyodwa. KwamaJamani amaninzi, kwakunengqiqo kulezi zizwe zibini ezinokutshatyalaliswa, kodwa iimbambano ezanqobileyo zazityhaphaza iJamani ziza kuziphindisela kwaye zisebenzise iSivumelwano saseVersailles ukuba ivalwe nayiphi na inyunyana yaseJamani ne-Austria, ukuba ivalwe nayiphi na i-Anschluss. Oku kwakungaphambi kokuba uHitler afike.
I-Hitler Iingcingo ze-Idea
Ngokuqinisekileyo, uHitler wayekwazi ukusebenzisa ngokusemthethweni iSivumelwano saseVersailles njengesiphathi sokuqhubela phambili amandla akhe, ukwenza izenzo zokweqa ukunyuka phambili kwimbono entsha yeYurophu. Kuninzi kwenziwa kwindlela awasebenzisa ngayo i-thuggery kunye nosongelo lokuya e-Austria ngoMatshi 13, 1939 kunye nokudibanisa iintlanga ezimbini kwi-Reich yakhe yesithathu. Ngoko i-Anschluss iye yaxinwa ngento engathandekiyo yombuso we-fascist, xa yayinombuzo ovela kwiminyaka engama-100 ngaphambili, xa imicimbi yeso siphi na isizwe, kwaye yayiya kubakho, ihlolwe kakhulu kwaye iyenziwa.
Iziganeko ezibalulekileyo kwimbali ye-Itali
Isishwankathelo seMbali yaseNtaliyane
Ukuqonda Iimpahla kwi-PHP
I-SMS Quotes Text to One Loved
Iingoma eziphezulu zokuKhuleka koMbulelo
I-TOEFL yoLwazi lweGrama kunye noLwakhiwo lweeNkqubo zokuSebenza
Iikholeji ze-Intanethi ze-Intanethi eziya kukukwenza ube nemihlali
Ama-Dinosaurs ama-10 aninzi awaziwayo
Isikhokelo sabathengi kubantwana bee Skateboards
Ukuthandana Kwezinto Zokudala: I-Stratigraphy kunye neNkcazo
Fumana Amaqiniso Ngamahloni eMisa e-US
Ngamanye amaxesha uMasculine, ngamanye amaxesha amaNqwenqileyo amabhinqa ngeSpanish
I-Taurus Sun Ngezibonakaliso Zenyanga